Công thức tính Chu vi Diện tích Hình Thang chuẩn toán học Euclid | Anybook.vn - Anybook
Công thức tính Chu vi Diện tích Hình Thang chuẩn toán học Euclid | Anybook.vn
Ny raikipohy amin’ny kajy ny vakim-paritra ny trapezoid Ary koa ny raikipohy amin’ny kajy ny faritry ny telozoro, dia tena tsotra ary saika lasa raikipohy malaza ho an’ny mpianatra maro, indrindra fa amin’ny semester faharoa amin’ny kilasy 5, dia ho zatra ny fahalalana ny endrika. sekoly, manomboka amin’ny famahana fanazaran-tena fototra, mifankazatra amin’ny holograms – endrika matematika izay heverina ho sarotra amin’ny kilasy ambony. Ao anatin’izany, ny raikipohy amin’ny kajy ny velaran’ny trapezoid sy ny perimeteran’ny trapezoid… dia fahalalana izay manasarotra ny fianarana azy ireo.
1 1. Inona no atao hoe Trapezoid?
1.1 1.1. Hevitra momba ny trapezoid
1.2 1.2. Karazana trapezoïde, endrika manokana amin’ny trapezoïde
1.3 1.3. Ohatra amin’ny trapezoid
2 2. Ny raikipohy amin’ny kajy ny perimeter ny trapezoid
2.1 2.1. Inona ny perimeter amin’ny trapezoid?
2.2 2.2. Ny formula ho an’ny perimeter ny trapezoid.
2.3 2.3. Ohatra sasany amin’ny fanazaran-tena kajy ny perimeter ny trapezoid (miaraka amin’ny vahaolana)
3 3. Ny faritry ny trapezoid sy ny raikipohy fototra amin’ny kajy ny velaran’ny trapezoid
4 4. Tranga manokana momba ny raikipohy amin’ny kajy ny velaran’ny trapezoid
4.1 4.1. Formula kajy ny velaran’ny trapezoida efamira
4.2 4.2. Formula kajy ny velaran’ny trapezoida rehefa fantatra ny lafiny efatra
5 5. Toro-hevitra haingana amin’ny fitadidiana ny raikipohy momba ny vakim-paritra sy ny velaran’ny trapezoid
5.1 5.1. Soso-kevitra hitadidiana ny raikipohy momba ny manodidina
5.2 5.2 Torohevitra haingana amin’ny fitadidiana ny raikipohy momba ny faritry ny trapezoid miaraka amin’ny tononkalo
6 6. Video lesona momba ny kajy ny vakim-paritra sy ny velaran’ny trapezoid
1. Inona no atao hoe Trapezoid?
1.1. Hevitra momba ny trapezoid
Ny trapezoïde amin’ny géométrie Euclidean dia efa-joro mivohitra misy lafiny roa mifanila. Ireo lafiny roa mifanandrify ireo dia antsoina hoe ny ilany fototra amin’ny trapezoïde. Ny sisiny sisa dia antsoina hoe sisiny lateral.
Ny trapezoïde dia efamira misy lafiny roa mifanandrify mifanila.
Ny lafiny roa mifanitsy dia antsoina hoe fototra roa.
Ny sisiny roa ambiny dia antsoina hoe sisiny lateral.
Raha misy lafiny roa mifanila ny trapezoïde, dia mifanandrify ny lafiny roa ary mifanandrify ny fotony.
Raha misy lafiny roa mifanandrify ny trapezoïde, dia mifanandrify sy mifanandrify ny lafiny roa.
1.2. Karazana trapezoïde, endrika manokana amin’ny trapezoïde
manjary efajoro: Zaridaina mivohitra misy sisiny iray mifanila.
Square trapezoid : Trapezoïde misy lafiny ilany mifanitsy amin’ny fotony.
Ao amin’ny géométrie Euclidean, ny trapezoida havanana dia trapezoida misy zoro mahitsy. Ny trapezoid efamira dia tranga manokana amin’ny trapezoid.
a) Famaritana: Ny trapezoïde zoro havanana dia trapezoïde misy zoro havanana iray.
b) Famantarana famantarana: Ny trapezoida iray manana zoro havanana iray dia trapezoida havanana.
– Trapezoid isosceles (hianatra amin’ny kilasy faha-8): Trapezoïde misy lafiny 2 mitovy
Ao amin’ny géométrie Euclidean, ny trapezoïde isosceles dia trapezoïde misy zoro roa mitovy mifanila amin’ny fototra iray. Ny trapezoid isosceles dia tranga manokana amin’ny trapezoid.
Ny trapezoid isosceles dia manana ireto toetra manaraka ireto:
Mitovy ny roa tonta.
Mifanaraka ny zoro ambany roa.
Mitovy ny diagonaly roa.
Ny trapezoid misy soratra dia trapezoida isosceles
Famantarana mba hamantarana isosceles trapezoid
Ny trapezoïde misy zoro roa mitovy mifanila amin’ny fotony dia trapezoïde isosceles. Trapezoida roa mitovy diagonal dia trapezoida isosceles.
Trapezoïde misy famaky roa mifanandrify amin’ny fotony roa dia trapezoida isosceles.
Trapezoïde misy lafiny roa mitovy (raha tsy mifanila ny lafiny roa) dia trapezoïde isosceles.
1.3. Ohatra amin’ny trapezoid
Iza amin’ireto tarehimarika manaraka ireto no trapezoïde?
2. Ny raikipohy amin’ny kajy ny perimeter ny trapezoid
2.1. Inona ny perimeter amin’ny trapezoid?
Famaritana: Ny perimeteran’ny trapezoïde dia ny fitambaran’ny halavan’ny sisiny rehetra (fototra roa sy lafiny roa)
2.2. Ny formula ho an’ny perimeter ny trapezoid.
Ny trapezoid dia polygon misy lafiny efatra izay faritana amin’ny halavan’ny lafiny efatra mitambatra ny perimeter. Azo takarina fa ny perimeter amin’ny trapezoid dia ny halavany izay mametra ny fiaramanidina. Na raha fintinina:
Ny perimeter amin’ny trapezoid dia mitovy amin’ny fitambaran’ny halavan’ny fotony sy ny sisiny.
P: perimeteran’ny trapezoïde.
a, d: halavan’ny sisiny roa ambany.
b, c: halavan’ny andaniny roa
2.3. Ohatra sasany amin’ny fanazaran-tena kajy ny perimeter ny trapezoid (miaraka amin’ny vahaolana)
a. Tadiavo ny perimeter amin’ny trapezoïde iray izay misy fotony 2 sy lafiny 2 ny halavany: 2cm, 5cm, 3cm, 2cm, tsirairay avy.
Ny perimeter ny trapezoid dia:
b. Ny tanimbolin’ny paoma trapezoidal dia manana fanambaniny lehibe 40m ary ambany kely mitovy amin’ny antsasaky ny ambany lehibe. Ny halavan’ny lafiny voalohany amin’ny zaridaina dia 10m, ny halavan’ny lafiny faharoa dia in-3 heny ny halavan’ny lafiny voalohany. Kajy ny perimeter an’io zaridaina io?
Ny halavan’ny zaza dia: 40 : 2 = 20 (m)
Ny halavan’ny lafiny faharoa dia: 10 x 3 = 30 (m)
Ny manodidina an’io zaridaina io dia: P=a+b+c+d=40+20+10+30=100 (m2)
3. Ny faritry ny trapezoid sy ny raikipohy fototra amin’ny kajy ny velaran’ny trapezoid
Inona ny faritry ny trapezoid?
Tahaka ny polygons hafa, ny velaran’ny trapezoid dia ny habetsaky ny fiaramanidina voafatotry ny sisin’ny trapezoid. Ity formula ity dia tsy sarotra loatra ary mora ianarana. Ity ambany ity ny formula tsotra sy fototra indrindra amin’ny kajy trapezoid.
Formula ho an’ny kajy ny velaran’ny trapezoid
Avelao ny a, b ny halavan’ny lafiny roa amin’ny trapezoida ABCD, h ny halavan’ny haavon’ny haavony voasintona manomboka eo an-tampon’ny A ka hatrany amin’ny sisiny ambany amin’ny CD. Avy eo dia manana ity formula manaraka ity isika amin’ny kajy ny velaran’ny trapezoid:
S=1/2 x (a+b) xh
Ny raikipohy momba ny velaran’ny trapezoïde dia azo ambara amin’ny teny toy izao: Ny raikipohy momba ny velaran’ny trapezoida dia ny antsasaky ny fitambaran’ny fototra roa avo roa heny ny haavony.
Ity no karazana formula mahazatra indrindra amin’ny kajy ny velaran’ny trapezoid rehefa manao fanazaran-tena ho an’ny faritry ny trapezoid ianao.
Olana: nomena trapezoida isosceles toy ny sary 2, miaraka amin’ny
AB= 3 sm, DC= 5 sm, AH= 4 sm
Ampiharo ny raikipohy kajy ny velaran’ny trapezoida isosceles => SABCD=2*(1/2×AH×DH) + (AB×AH).
Kajy ny velaran’ny trapezoid ABCD = 2 * ( 1/2*4*1) + ( 3*4 ) = 14 cm^2.
4. Tranga manokana momba ny raikipohy amin’ny kajy ny velaran’ny trapezoid
4.1. Formula kajy ny velaran’ny trapezoida efamira
Ny trapezoid efajoro dia manana ny tena mampiavaka ny manana lafiny sy ny haavony. Noho izany dia afaka mahafantatra mora foana ny haavon’ity tarehimarika ity ianao. Ny raikipohy amin’ny fanisana ny velaran’ny trapezoid efamira dia toy izao manaraka izao:
Avelao ny ABCD ho trapezoïde efamira misy sisiny AD ary ny haavony voasintona avy amin’ny A mankany amin’ny sisiny CD. Ny halavan’ny lafiny roa amin’ny trapezoïde dia a sy b, tsirairay avy.
Avy eo, ny velaran’ny trapezoida efamira dia:
4.2. Formula kajy ny velaran’ny trapezoida rehefa fantatra ny lafiny efatra
Amin’ny ankapobeny dia hampiasa ny raikipohy isika mba hanombanana ny lanjan’ny lafin-javatra 3 lehibe: ny halavan’ny lafiny roa ambany sy ny haavony. Amin’ny fanazaran-tena mandroso kokoa, dia ho zatra tsikelikely amin’ny raikipohy amin’ny kajy ny velaran’ny trapezoid isika rehefa fantatsika ny faritry ny lafiny efatra. Azonao takarina toy izao manaraka izao ity raikipohy ity.
Avelao ABCD trapezoid amin’ny fototra AB, CD dia Q, P tsirairay avy, ny lafiny roa BC, AD dia R, S tsirairay avy.
5. Toro-hevitra haingana amin’ny fitadidiana ny raikipohy momba ny vakim-paritra sy ny velaran’ny trapezoid
5.1. Soso-kevitra hitadidiana ny raikipohy momba ny manodidina
Miaraka amin’ny raikipohy amin’ny fanisana ny perimeter amin’ny trapezoïde manokana na ny raikipohy amin’ny fikajiana ny perimeter amin’ny endrika amin’ny ankapobeny toy ny telozoro, rhombus, mahitsizoro, efamira, … dia mifototra amin’ny fitsipika iray. Mitovy amin’ny fitambaran’ny halavan’ny sisiny mandrafitra azy ny vakim-paritra misy azy.
Ohatra, ny telozoro, ny perimeterny dia mitovy amin’ny fitambaran’ny halavan’ny lafiny 3.
Miaraka amin’ny quadrilaterals: rhombus, rectangle, trapezoid, sns., Ny perimeteran’ireo bika ireo dia mitovy amin’ny fitambaran’ny halavan’ny lafiny 4 mandrafitra io endrika io.
Toy izany koa, ho an’ny pentagon (lafy 5) sy hexagon (lafy 6) dia mitovy amin’ny fitambaran’ny halavan’ny lafiny 5 sy 6 mandrafitra ny bikany koa ny rijan’ny perimeter.
5.2 Torohevitra haingana amin’ny fitadidiana ny raikipohy momba ny faritry ny trapezoid miaraka amin’ny tononkalo
1. Te hanao kajy ny velaran’ny trapezoida
Ambany lehibe, ambany kely ampidirintsika
Dia ampitomboy ny siramamy ambony
Zarao ihany ny vokatra.
2. Te hanao kajy ny velaran’i Vietnam
Manampy an’i Shina sy Thailandy izahay
Ampitomboy amin’ny Laos izany
Hizara izany i Kambodza na inona na inona…)
Ny mahitsizoro nianarako
Ampitomboy ny lavany amin’ny sakany dia izay
Tena mahafinaritra ny kianja
Ampitomboy eo no ho eo ny sisiny fotoana mivoaka ny sisiny
Sarotra ve ny manana telozoro?
Ampitomboy ny ambony, ary zarao roa
Mora ihany koa ny manisa faribolana
Ny halalin’ny radius times pi dia to
Ny sakana koa dia tena haingana ny fanaovana
Sarotra ve ny mahita ny manodidina?
Handeha fanadinana aho anio
Ampitomboy ny circumference ny fototra amin’ny haavony.
6. Video lesona momba ny kajy ny vakim-paritra sy ny velaran’ny trapezoid
Ato amin’ity lahatsoratra ity dia ny anjarako rehetra momba ny trapezoid sy ny fomba kajy ny perimeter ny trapezoid, ny velaran’ny trapezoid. review.edu.vn. Manantena ny hitondra vaovao mahasoa ho anao amin’ny fizotry ny fikarohana.
READ Top 9 phần mềm quay video màn hình máy tính phổ biến nhất | Anybook.vn
Previous: Những điểm đặc Biệt Chỉ Có ở Trường Đại Học Luật TP HCM – Đề án 2020 | Anybook.vn
Next: Những tựa sách hay nhất của Nguyễn Nhật Ánh khuyên đọc trong đời | Anybook.vn